Ugu yaraan 18 qof oo ku dhimatay dhul-gariir ku dhuftay Talyaaniga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 18 qof oo ku dhimatay dhul-gariir ku dhuftay Talyaaniga
August 24, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dhul-gariirka ayaa saameeyay dhismayaasha in ay burburaan. Sawirka: Twitter.
Rome-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 18 qof ayaa la aaminsanyahay in ay ku dhinteen kadib markii dhul-gariir xoogan uu ku dhuftay bartamaha dalka Talyaaniga, tobonaan xaafado ah ayaa ku burburay dhul-gariirka oo dhacay maanta oo Arbaco ah, sida ay baahiyeen warbaahinta maxaliga ah ee Talyaaniga.
Haayada kormeerka dhulka (USGS) ee Maraykanka ayaa sheegtay in dhul-gariirkaas oo ka dhacay meel u dhow magaalada Norcia ee gobolka Umbria uu dhacay 3.36am ee saacada gudaha Talyaaniga, haayada ayaa sheegtay in cabirka dhul-gariirka uu ahaa 6.2.
Dhul-gariirka ayaa sababay dhismayaasha in ay burburaan, iyadoo dadka deegaanka ay u carareen wadooyinka magaalooyinka si ay uga baxsadaan in dhismayaasha kusoo dumaan.
Dhul-gariirkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka Talyaaniga ayaa ku dhuftay magaalada bartamaha kutaala ee L’Aquila sanadkii 2009, waxaana ku dhintay in ka badan 300 qof.
August 25, 2016 Tirada dhimashada ka dhalatay dhul-gariirkii ku dhuftay Talyaaniga oo gaartay 241 qof